Inona no nitranga tamin'i Mosesy ny tena va izy? | Apg29
Inona anefa no nitranga tamin'i Mosesy ny vatana dieny mbola tsy nalevina? Soratra Masina milaza na inona na inona momba azy io?
Mosesy fandevenana Tsy fandevenana tsotra. I Andriamanitra mihitsy no nandevina azy ary tsy misy olona mahalala izay no nandevenana azy.
I Mosesy mpaminany, toy ny tsy nisy ho azy. Dia niaina zavatra iray izay tsy nisy aloha na ny manarakaraka azy dia niaina ny Tompo niteny taminy hiatrika ny tavany "(5 Mos. 34:10).
Mosesy, mpanompon'i Jehovah "maty tany amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah izay, dia naleviny tao an-dohasaha akaikin'i Beti Pegor Moaba, fa tsy misy mahalala ny marina fasana (5 Nom. 34: 5-6).
Izy dia roa-polo amby zato taona izy, fony maty, fa na dia teo aza ny taona, dia tanteraka salama sy matanjaka. Hoy ny Baiboly:
"Teo imasony tsy Simba ary tsy very ny heriny" (5 Mos. 34: 7).
Nandritra ny fandevenana tsy tapaka ianao mametraka ny maty tao am-pasana. Nefa ny amin'i Mosesy ny Tompo nikarakara izany, ary tsy nisy navela hahita izay itoeranareo, na ny fomba nitranga.
Inona anefa no nitranga tamin'i Mosesy ny vatana dieny mbola tsy nalevina? Soratra Masina milaza na inona na inona momba azy io? Ao amin'ny Joda andininy faha-9, mamaky isika hoe:
"... na dia Michael sahy niampanga ny devoly, na naneso azy fony izy niady tamin'i taminy ny amin'ny fatin'i Mosesy. Hoy fotsiny izy: 'Ny Tompo hamaly anareo.' "
Ny ady eo amin'ny Michael sy ny devoly izy ny amin'izay manan-jo tompon'ny vatana Mosesy. Devoly nilaza izany, satria te-hametraka ny tena ao am-pasana. Afa-tsy Mikaela izany efa nampianarina. Ny vatana Mosesy ho any an-danitra.
Ao amin'ny Hebreo. 2:14 dia teny izay mahaliana ao anatin'ity lohahevitra ity:
"Koa satria ny ankizy manana nofo aman-drà, dia koa izy (Jesoa) dia anisan'ny koa izany ihany, fa noho ny fahafatesany dia tsy manan-kery ho azy fa nisy ny fahafatesana eo amin'ny heriny, izany hoe ny devoly".
Ao amin'ny fandikan-teny hafa milaza izany:
"... amin'ny alalan'ny fahafatesana fahafatesana manokana mpanjaka izany."
Indrindra fa ny fahafatesana devoly mitempo, sy ny faritra. Izy no anton 'ny fahafatesana izay tonga teo amin'izao tontolo izao, ary te hikarakara ny vatany sy hitondra azy ireo ho any am-pasana. Ary i Mosesy vatana.
Ao amin'ny 1 Kor. 5 i Paoly dia miresaka momba lehibe endriky ny fitondran-tena maloto. Tsy nisy olona izay nonina niaraka tamin'ny vadin-drainy. Ny Apôstôly dia manameloka mafy izany faharatsiana sy manoratra ao amin'ny andininy 3-5:
"Ho ahy, izay azo antoka fa tsy eo amin'ny tena, nefa teo ihany ny fanahiko, toy ny efa teo ihany aho no manamelo-ireo izay nanao izany.
Ao Jesosy Kristy Tompontsika izahay, ry ianareo sy ny fanahiko ho avy miaraka amin 'ny Tompo Jesoa Kristy fahefana ny teny mampita izany ho an'i Satana hanimbana ny nofo, fa ny fanahy mba ho voavonjy ao amin'ny Tompo Jesosy. "
Eto isika dia mahita fa Paoly tamin'ny Korintianina, dia hiala izany olona i Satana "amin'ny handringanana ny nofo."
I Paoly dia fahitana ara-paminaniana, izy na dia tsy tonga dia afaka mahita ny zava-mitranga ao amin'ny fiangonana sy ny fandriky ny fitsarana 'ireo izay efa nanao izany fahatezerana, ary nanafintohina ny renikeliny amin'ny fomba mahatsiravina indrindra.